काठमाडौँमा थपिए सबैभन्दा धेरै संक्रमित, देशभर कुन जिल्लामा कति थपिए ? [विवरणसहित] – Rapti Khabar
यस्तै उपत्यकामा ७५५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ७५५ जनामा संक्रमण देखिएको हो।
काठमाडौंका ६०९, भक्तपुरका ५१ र ललितपुरका ९५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितमध्ये ५० प्रतिशत उपत्यकाका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।